CMS Expo: Otu Ihe Dị Mma n'etiti Azụmaahịa na Mgbakọ na Midwest | Martech Zone
Enwere m obi ụtọ ikwu okwu na CMS Ngosi urua ke Chicago. Nke a bụ oge izizi m gara ogbako a amabeghị m ihe m ga-atụ anya ya. O juru m anya nke ukwuu na ọ dị ukwuu.
The CMS Expo bụ mmụta na ogbako azụmahịa nke etinyebere na Usoro Njikwa Ọdịnaya na ọrụ weebụsaịtị. Ọ na-egosipụta ọtụtụ egwu gbadoro ụkwụ na gburugburu azụmaahịa na teknụzụ. Uzo ise na ogbako nke afo a bu Joomla, WordPress, Drupal, Plone, na Business. M ka na-arụ ọrụ ime ka ha gosipụta ọkacha mmasị m CMS oge ọzọ. Anọ ụzọ egwu anọ izizi dị na CMS dị iche iche egosipụtara mgbe azụmaahịa azụmaahịa kpuchiri ahịa, nyocha, omume kacha mma, mgbasa ozi mmekọrịta na isiokwu ndị ọzọ metụtara azụmahịa.
Enyere m ihe ngosi abụọ maka usoro azụmahịa: "Habkpụrụ 7 nke Weebụ Ndị Dị Irè" na "Twitter maka Business". Ha abụọ gara nke ọma ma nweta nnukwu nzaghachi. Ọ bụ nnukwu ìgwè mmadụ na enwere m ọtụtụ ajụjụ na mkparịta ụka mara mma.
Nke a bụ ihe masịrị m gbasara CMS Expo:
Onye ọ bụla nwere omume enyi na enyi
Ndị kwuru okwu amaka
Mkpokọta ogbako ahụ bara ezigbo uru ma mee nke ọma
Facilitylọ ọrụ ahụ (Nkwari akụ Orrington) dị mma
Ndị na-ahazi na-etinye nnukwu ihe omume na nza nke ịkparịta ụka n'.ntanet
Ọ dị oke ọnụ, nke pụtara azụmahịa dị elu na-abịa (ee, enwere m mmasị na nke a)
Naanị ihe na-amasịghị m nke ukwuu bụ eziokwu na ihe niile na-agba ọsọ n'oge n'ihi ya, m ga-egbutu oge ọmụmụ m obere karịa mana nke a bụ obere okwu.
Agara m nnukwu nnọkọ na Google Analytics na nyocha ahịa ma nwee nnukwu oge izute ndị ọhụụ. Ndị nwere mmasị karịa na egwu egwu, ọkachasị metụtara otu atụmatụ CMS na-emeghe ụzọ, ga-ahụ ihe ahụ bara ezigbo uru. M tinyere isi m n'ime ole na ole n'ime nnọkọ ndị a ma hụkwa ọtụtụ nkata Twitter na-akparịta ụka banyere egwu ndị a. Ọtụtụ n’ime ndị kwuru okwu na CMS Expo bụ ndị izizi izizi na ndị mmepe nke ụfọdụ CMS ahụ nọchitere anya.
Ndị bịara na 2010 CMS Expo dị gburugburu 400 yana ọ gụnyere otu ndị otu nnukwu ndị ngosi gosipụtara ọmarịcha ọrụ nke ire onwe ha na inye aka na gburugburu ebe obibi. Ọbụna ha na-enye iPads! Enwere m mmasị ịhụ ọtụtụ ndị ọkà okwu na ndị bịaranụ si ebe dị anya, gụnyere France, na Norway.
Ọnọdụ nke ogbako ahụ bụ n'ezie nke ihe ọ funụ, mmụta, na inyere ndị ọzọ aka ma ọ bụ ihe ọ pleasureụ ịbụ akụkụ ya. John na Linda Coonen (CMS Expo founders) rụrụ ọmarịcha ọrụ na m na-atụ anya na-esote afọ omume.
Ọ bụrụ n’ị na-arụ ọrụ n’ahịa na / ma ọ bụ na teknụzụ, tụlee ịga n’afọ CMS Expo na-esote. Ọ ga-abara gị ezigbo uru.
Tags: cms expoogbako ahiaogbako midwestogbako teknụzụ
Mee 18, 2010 na 9: 17 AM
Edemede, ekele. Ọ bụla buzz banyere NkwupụtaEngine na CMS Expo?
Mee 21, 2010 na 7: 11 AM
Ọ bụghị a peep banyere ExpressionEngine 🙂